10 Koorsooyinka Tababarka Diilan ee Imtixaanka Software wuxuu kaa dhigayaa qofkii ugu badnaa
10 Koorsooyinka Tababarka Diilan ee Imtixaanka Software wuxuu kaa dhigi karaa qof kufeesan
Imtixaannada codsiyada casriga ah / software, sida barnaamijyada isku dhafan / midab-kala-soocid, kumbuyuutarka dariiqa, iyo moobiilka guurguura waxay baraan caqabadaha kooxaha imtixaanka ee barnaamijka ee maanta jira, kuwaas oo intooda badan aan la qalabayn qalabka habboon iyo aqoonta si ay u kiciyaan caqabadaha. Tiknoolijiyada Cusub ee Heshiiska Tiknooloojiyada waxay bixiyaan imtixaan farsamaysan oo farsameed Software Software & Xaqiijinta si ay kaaga caawiso bixinta codsiyada tayada & xawaaraha ganacsigaaga.
Ku dhiiri gali inaad tijaabiso
HP VuGen v11.5
HP QTP UFT 11.5x waxyaabaha lagama maarmaanka ah
Barnaamijka Lifecycle HP Application (ALM)
10 Koorsooyinka Tababarka Diilan ee imtixaanka Barnaamijka & Shahaadada
1. Tababaraha Selenium
Ujeeddada Sahanka ee Selenium
2. Tababbarka Imtixaanka Barnaamijka
Ujeedooyinka Imtixaanka Software
Bartilmaameed Dhibcaha Imtixaanka Hubinta Software
3. HP VuGen v11.5
Yoolalka HP VuGen v11.5
Bartilmaameedka Bartilmaameedka VuGen v11.5
4. Tababar Tababarka HP
Bartilmaameedka Bartilmaameedka Tababarka HP-ga
Shuruudaha Tababarka HP-ga
5. HP Gawaarida
Ujeedooyinka loogu talagalay HP Gawaarida
Bartilmaameedka Bartilmaameedka Mashiinka HP
Shuruudaha loogu talagalay mashiinka HP
6. HP QTP UFT 11.5x muhiimadda tababarka
Ujeedooyinka UFT Tababarka
Ujeeddada Dhageysiga ee UFT Tababarka
Shuruudaha tababarka UFT
7. Tababar Tababarka V11.5 ee Runner Run
Goolasha Tababarka V11.5 Stack Runner
Bartilmaameed Dhegeyste loogu talagalay Tababarka V11.5 Stack Runner
8. Ilaaliyaha xogta
Yoolalka Macluumaadka Ilaaliyaha
Bartilmaameed Dhegayso Macluumaadka Ilaaliyaha
Shuruudaha Ilaalinta Macluumaadka
9. Tababbarka Maareynta Nolol La'aanta
Goolasha Tababarka Tababarista Maareynta Nololeedka
Bartilmaameed Dhegeysiga Tababarka Hoggaanka "Lifecycle Management Training"
10. Imtixaanka Barnaamijka - Gawaarida
Imtixaanka Barnaamijka - Barnaamijka Gaadiidka ayaa bixiya:
Waxay si wadajir ah u sameeyaan Imtixaanka Farsamaynta Shaqada (UFT / QTP):
Generator Generator (VuGen):
Nidaamka Dareemaha (LR):
Maareynta Lifewalka Lacageed (ALM):
Bartilmaameed Dhageyste loogu talagalay Baaritaanka Software - Gawaarida
Selenium waa il-bannaan iyo qalab farshaxan oo farsamo leh oo loo adeegsado qalabka wax lagu qoro (codsiyada websaydhka). Waxaa la oggol yahay sida hoos timaadda Laanta Apache License 2.0. Selenium waa qalab ka mid ah qalabyada caawiyaha ah ee farsameynta kaliya codsiyada websaydhka. Tababarka casharkani wuxuu ku siin doonaa dusha sare ee fahamka hoose ee Selenium iyo qalabka la xidhiidha iyo isticmaalka. Waxa uu leeyahay karti u shaqeynaya iskudubarid habab kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan. Selenium ma aha oo kaliya qalab keli ah, halkii ay ku habboon tahay qalabyada ka caawiya falanqeeyayaasha si loo riixo arjiyada elektarooniga ah si wax ku ool ah oo sax ah.
Selenium waa nidaam tijaabo ah oo wax lagu tijaabinayo barnaamijyada shabakadda. Tani waa cashar dhammaystiran oo lagu baranayo baaritaanka maktabada oo ay ka mid yihiin Hordhaca Sawirada Automated, Hordhacda Aqoonsiga Selenium iyo Nidaamkiisa, Selenium IDE fikradaha, Selenium RC, TestNG, Farsamooyinka Darawalnimada Webka, Qaabdhismeedka iyo Selenium Grid iyo wixii la mid ah.
Selenium waa qalab furan.
Selenium waxaa lagu gaari karaa horumarinta kala duwan ee soo saarta DOM.
Waxay leedahay karti ay ku fuliso qoraallada iskudhafan barnaamijyada kala duwan.
Waxay sameyn kartaa qoraallo ku saabsan qaababka kala duwan ee shaqada.
Selenium taleefannada gacanta.
Imtixaannada tijaabada ah ee barnaamijka, sidaa daraadeed xarunta AAN Looma baahna inta codsiga hore loo sii marayo.
Waxay samayn kartaa tijaabooyin la siman iyadoo la isticmaalayo Selenium Grids.
Layligani waa layli loogu talagalay khabiirada tijaabada ah ee barnaamijka kuwaas oo laga yaabo inay rabaan inay qaataan waxyaabaha muhiimka ah ee Selenium iyada oo loo marayo sawirro muuqaal leh. Jimicsiga tacliinta waxaa ku jira waxyaabo ku filan oo laguu hirgelin karo Selenium meeshii aad naftaada u qaadan lahayd qadar fara badan.
Ka hor intaadan sii wadin jimicsigan tababarka, waa in aad leedahay faham muhiim ah ee Java ama wixii su'aallo kale ah oo habeynaya lahjada barnaamijka. Sidoo kale, waa in aad noqotaa mid aqoon u leh shuruudaha tijaabada fikradaha.
Koorsadani waxay xoogga saartaa nutska iyo bolts ee Imtixaanka Software kaas oo kaa caawin doona inaad hesho barashada cabirrada imtixaanka, qaababka, iyo hababka si aad uga shaqeyso warshadaha imtixaanka software.
Koorsadani waxay ku xiran tahay xaaladaha joogtada ah, taas oo caawineysa in la fahmo fikradaha imtixaanka, SDLC, STLC, baaritaanka gacanta iyo mawduucyo kala duwan kuwaasoo muhiim u ah inay la shaqeeyaan baaritaanka gacanta. Koorsadani waxay ku salaysan tahay aqoonsashada baahiyaha isticmaalka, go'aan gaadhida heerarka kala duwan ee imtixaanka, ka dib markii macaamiishu ay ku aadi doonaan noocyo kala duwan oo imtixaan ah si ay u eegaan arjiyada codsiga faa'iidada leh iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn, waxayna u diyaar garoobi doonaan tijaabooyinka iyo xaaladaha imtixaanka si ay u hubiyaan codsiga xagal kasta , ugu dambeyntii waxay gooyn doonaan maqnaashaha iyo soo saarista faahfaahin ku saabsan hannaanka tijaabada tijaabada.
Aqoonsiga macnaha ereyada iyo macnaha imtixaanka software iyo heerarkiisa
Kala saar qaababka SDLC oo kala duwan
Muujiyaan habraaca tijaabada si loo fuliyo waxyaabaha loo baahan yahay ganacsiga
Kala saaraan gacan qabashada dembi baadhista
Astaamee maamulka halista iyo ogow sida ay u khusayso imtixaanka software
Isticmaalka warbixinta iyo tilmaamayaasha fulinta furaha si loo qiimeeyo guusha
Kala saaraan noocyada imtixaanka aan wax ku oolka aheyn
Kala saar fikradaha imtixaanka la qaaday
Macaamil kasta oo qalbi furan oo u baahan inuu bilaabo xirfadda imtixaanka software
Meelaha iyo barnaamijka
Baahida imtixaanka dhammeystiran waa isku xiran yihiin. jimicsiga xagga SUT si uu u dhigo daaqada, taas oo ah mid si aad ah u dhib badan ama midkood wuxuu kudhici karaa 30% -40% natiijada fulinta ee la socdo. Si aad u garaacdo xaaladahan oo kale si aad u hesho heer kasta oo ka mid ah 90% -95% natiijooyinka imtixaanka, falanqaynta fulinta waxay isticmaashaa VuGen si aad u samayso qoraallada Vuser.
Vugen wuxuu diiwaangeliyaa wadashaqeynta ka dhaxaysa Client / Server (isdhexgalka), si ay u qabsadaan dirista iyo aqbalida macluumaadka. Waxay isticmaashaa turjumaan luuqadeed oo C ah si uu u qoro habka SUT, taas oo ka dhigaysa qoraalka C. Marka ugu horreysa waxay bilaabmaysaa hawlaha diiwaangelinta si ay u muujiyaan akhlaaqda iyo waxqabadka macaamiisha farsamada ee ka shaqeeya injineernimada C / S.
Kadib markii qoraalkii aasaasiga ahaa lagu sharraxay, ka dibna wuxuu isbedelayaa hagaajinta qoraalka ah in uu Parameterize (Ka-hortagidda Xogta Macluumaadka) oo ka dhigo Xaqiijinta diiradda (Jawaab Baaritaanka Hubinta). Tani waxay ku jiri doontaa aragti iyo isugeyn loo galo warqad. Koorsadan Vugen waxaa loogu talagalay inay siiso macluumaad ku shaqeynaya si loo hubiyo anshaxa isticmaalka iyada oo loo eegayo culeyska isticmaalka qalabka makaanikada.
Waxbarashada aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah imtixaanka culeyska
Aqoonsadaan LoadRunner (LR) qaybaha
Codso habka shaqada loo qoray si loo sameeyo xaalad muhiim ah oo LR ah
Diiwaanka qoraalka ee jawiga webka oo isticmaalaya Generator Generator (VuGen)
Cabbiraan tallaabooyinka iyo foomamka ganacsiga ee isticmaalaya is-weydaarsiga
Aqoonsi ku samee qoraallada si aad u hesho macluumaadka macluumaadka macmiilka
Qoraallada Baasaboorka ah si loo hirgeliyo macluumaadka server-soo saaray
La shaqeynta Rendezvous si aad u soo saarto xarriiqda maxkamada gaar ahaaneed
Engineer Qaadista Tayada iyo Karti-wax-qabeyaasha.
Macaamiisha cusub ee u baahan inay samaystaan ​​qoraallo si ay u eegaan codsiga shabakadda.
Shaqaalaha ka shaqeeya habka imtixaanka culeyska.
Meelaha iyo goobaha barnaamijka.
Calaamadaha barnaamijka C.
Fikrada Macmiilka / Macmiilka Macmiilka.
Hp Trim wuxuu sidoo kale la yiraahdaa Maamulaha Diiwaanka. Koorsadan HP Trim waxaa loogu talagalay in ay ka caawiso agaasimayaasha inay diyaariyaan, qorsheeyaan oo dejiyaan hababka shaqada ee Diiwaanka HP-ga. Xubnaha waxay samayn doonaan habraac shaqo oo ku lug leh ururadooda.
Waxay ku dareysaa weli ma aha mid culus, diiwaannada diiwaangashan, maareynaya macaamiisha, shaqaalaha ganacsiga ee waawayn iyo asxaabtii kale ee xarumaha dhexe
Dhaqdhaqaaqa waxtarka leh ee Isticmaalaha Ugu dambeyn Isticmaalaya ama waayo-aragnimo saami ah ee bilaha 6 ama dhammaan adeegsiyada HP Trim ama Macluumaadka HP-ga ee khabiir ku takhasusay.
Barashada heerarka maamulka xogta iyo foomamka ganacsiga gudaha.
Gacmahani waxay ku tusinayaan fikradaha iyo hababka ugu wanaagsan ee loo baahan yahay in la dhiso, qaabeynta, habka dhismaha iyo maamulka amniga ee nidaamka Tipping Point. Iyada oo loo marayo cinwaanada caqliga leh iyo gacmahana layliyo, xubnuhu waxay ogaan doonaan sida loo fuliyo Nidaamka Ka-hortagga Argagixisada (IPS) iyo Nidaamka Maamulka Amniga (SMS).
Ka dib markaad dhameysid koorsada HP, waa inaad haysataa karti aad ku sameyso raacitaanka:
Fahmaan fikradaha amniga aasaasiga ah
La soco Nidaamka Kahortagga Ka Hortagga Nidaamka iyo naqshadeynta
Fahamka Nidaamka Maaraynta Ammaanka Nidaamka iyo naqshadeynta
Naqshadeynta iyo xaaladaha
Fahmaan nidaamyada aqbalaadda
Abaabulayaasha injineeriyiin, qabanqaabiyaan xirfadlayaasha, qabanqaabiyaan maamulayaasha, kormeerayaasha amniga, agaasimayaasha mashruuca, injineerada qaabdhismeedka, abaabulidda farsamooyinka amniga iyo qabanqaabada nashqadayaasha.
Abaabulidda abaabulka beeraha ee maamulka iyo maamulka maamulka
Barashada guud ee nidaamka iyo aaladaha maamulka amniga
Ka qayb qaadashada Nabadgelyada Nabadgelyada
Koorsadani waxay xoogga saartaa shaqooyinka asaasiga ah ee Baaritaanka Hawlaha Mideysan oo kaa caawin doona inaad ku timaaddo goobta imtixaanka software iyada oo faa'iidada qalabka wax lagu tijaabiyo robotiinta faa'iido leh. Ka hor inta kale koorasku wuxuu ka bilaaban doonaa diiwaanka iyo ciyaaraha ciyaarta, xubnuhu waxay baran doonaan awoodda ay ku sameeyaan qoraallada cusub, iyagoo beddelaya qoraallada si ay u kobciyaan imtixaannada. Dib-u-habeynta, oo ay ku jiri doonaan aragti iyo is-waafajin ay ku qoranyihiin qoraalka, oo ay ku jiraan iskudhafista, baraha, iyo qiimeynta.
Xilliga kooraska, xubnuhu waxay isbarbardhigaan heerarka caadiga ah ee ay sameeyeen ka dib markii ay soo saaraan maaddaama ay ku muujiyaan qoraallo imtixaan oo heer sare ah. Si loo balaariyo dib u soo noqoshada waxay sameyn doonaan waxqabadyada dib loo isticmaali karo, maktabyada shaqada, iyo dukaamada su'aalaha la wadaago, xubnuhu waxay ku haboonaan doonaan inay u habboon yihiin inay tijaabiyaan nooc kasta oo isticmaal ah.
Samee qoraalka tijaabada ah ee maktabadda aasaasiga ah ee isticmaalaya tijaabada gacanta
Kordhinta imtixaanka lagama maarmaanka u ah isticmaalka sinjiga marka la duubayo iyo duubista duubista
Samaynta qoraalka kumbuyuutarrada oo loo isticmaalo waxyaabo badan oo la isticmaalo
Sameynta dhaqdhaqaaqyo dib loo isticmaali karo iyo bedelida warqad dheeraad ah
Isticmaalka Mawduuc Muuqaal
Qaadashada tallaalka Nooca Aqoonsiga iyo beddelista caddaynta kala soocista guryaha
La shaqeynta Noocyada Muuqaalka si aad uga dhigto mid firfircoon
La shaqeynta aragti kala duwan ee UFT
Samaynta kontarool khaas ah si loo xaqiijiyo arjiga arimaha macmiilka
Ku shaqeysiga AUT iyo UFT adigoo isticmaalaya iskudhafka iyo qaybaha kala duwan ee UFT
Ka gudubka wareejinta kala duwan ee macmiilka isticmaalka
Xiritaanka macluumaadka waqti-dhaafka ah ee wakhti go'an oo la isku haleyn karo
La shaqeynta tijaabada baaritaanka
Macaamiisha cusub ee u baahan in laga baddalo buug-gacmeed si loo baaro robotiga iyadoo la adeegsanayo UFT
Wixii Mashruuca Tayada Hubinta Tayada ah ee u baahan inuu muujiyo nooca hogaanka kooxda isagoo isticmaalaya UFT
Meelaha iyo goobaha barnaamijka
Waayo-aragnimo u yeelasho leh:
Si loo sameeyo tijaabo aan ku shaqeyneynin sida imtixaanka waxqabad, falanqaynta fulinta waxay isticmaalaan qalabka iswada-dagalka sida LoadRunner. Waxaa loo istcimaalaa si loo soo saaro saxan ka sarreeya Server-ka si loo hubiyo fulinta SUT (Server oo tijaabo ah). LoadRunner waa software xirmo ah oo ka kooban saddex qalabka software:
Generator Generator (VuGen)
Stack Runner wuxuu xoojiyaa baaritaanka fulinta si uu u sameeyo Vusers (Isticmaalayaasha Waalidka) si ay ugu dhejiyaan culaysyo badan oo ku saabsan qawaaniinta ku saabsan hababka kala duwan ee tijaabinta fulinta sida sida tijaabooyinka tijaabinta, imtixaanka cadaadiska, imtixaanka dulqaadka, tijaabada isugeynta iyo wixii la mid ah.
Macluumaadka asaasiga ah ee looga baahan yahay baaritaanka baayacmushtarka
Isticmaalidda qoraallada loo adeegsado isticmaalka VuGen, samee goobaha wakhti go'an, la shaqaynta shaashadaha fulinta, soo bandhigida gawaarida xamuulka (LGs), iyo kordhinta tirada isticmaalaha Farsamada (Vusers) ee xaalad LR marka la eego ujeeddooyinka tijaabada cabbirka
Kala soo bax oo ku tijaabi arjigaaga codsigaaga adigoo ku maraya xaalad
La shaqeynta jaantusyada iyo qorshaha isticmaalka Falanqaynta
Macallimiinta wax ka qabta habka baaritaanka culeyska.
Koorsadani waxay bixisaa macluumaadka aasaasiga ah si loo xoojiyo waardiyayaashu si ay u habeeyaan una kormeeraan barnaamijka HP Data Protector. Tababarada gacmaha ee ku shaqeeya shaybaarka ayaa xoojiya kalfadhiyada khudbadaha si loo damaanad qaado faham xoogan oo ah xoojinta iyo fikradaha soo kabashada, faa'iidada software-ka iyo codsigeeda si ay u maamulaan xukunka xabsiyada.
Soo bandhig oo faafi barnaamijka HP Data Protector ee ku hareeraysan agagaarahaaga ama ka samee dib-u-hagaajin ka soo baxa HP Data Protector ee hore.
Diyaarso sheyga software ee HP Data Protector.
Diyaarso jawaabahaaga Taariikhda Dhawaaqa iyo Taageeridaada si aad u isticmaasho barnaamijka HP Data Protector.
Isticmaal shayga software-ka ee HP Data Protector si loo xoojiyo, dib-u-sameynta, iyo shaashadda laga soo qaado GUI iyo khadka taleefanka.
Kana sheekeyso barnaamijka HP Data Protector
Awoodaha iyo agaasimayaasha qaab-dhismeedka ee isticmaalka software-ka Xogta HP.
Qaab-dhismeedka iyo Maamulka Shabakada ama khibrada la barbardhigi karo.
Qodobbo gaar ah iyo waxyaabaha loo baahan yahay si loo fuliyo mid ka mid ah shuruudaha la xidhiidha, fiiri sawirka caddaynta ee ku yaalla goobta HP ExpertOne.
Koorsadan ALM waxay ku tiirsan tahay nuts iyo xargaha maaraynta Maareynta Nololeedka ee kaa caawineysa inaad kormeerto dhammaadka nolol-maalmeedka isticmaalka iyo marxaladda imtixaanka. Ugu horreyntii koorsada waxay bilaabi doontaa inay iska xakameyso Maaraynta Maareynta Maareynta Maareynta Nafaqada ee Macmiilka u oggolaanaya macmiilka inuu sameeyo oo kormeero hawlaha iyo macaamiisha oo ay weheliyaan xuquuqda macmiilka. Ka dib markii macmiilka qaybta maamulku uu la kulmi doono macaamiil nololeed oo ka soo baxa sii-deynta ku-meel-gaadhka wakhtiga dhammaystirka nolol-dhamaadka, Shuruudaha lagu muujinayo faa'iidada arjiga, Qorshaha Imtixaanka wuxuu faa'iido u yeelan doonaa habeynta habka imtixaanka iyo xaaladda, Shaybaarka Imtixaanka wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay fuliyaan imtixaanka la filayo, in la sameeyo oo la kormeero waxyeellada iyo Dashboard oo aragto kaas oo awood u leh inuu soo saaro warbixinno iyo jaantusyo si loo baaro isticmaalka wanaagsan.
Astaamaha Maaraynta Maareynta Nolol Lifaaq (ALM)
Fahmaan kala saarida udhexeeya ALM interfaces
Samee sii deynta, wareegyada iyo horumarinta waxyaabaha loo baahan yahay
Baaritaan khataraha ku xiran shuruudaha
Samee tijaabooyinka iyo maadooyinka imtixaanka diyaarinta geed
Soo koob oo samee qorshe tijaabo ah
Samee qoraallo imtixaan ah oo ka socda talaabooyinka qaabeynta
Samee tijaabooyin tijaabo ah, Hirgelinta buug-gacmeedka iyo baaritaanka robots
Diiwaan gelinta imtixaanka iyo raadinta ayaa ku saabsan
Isku qor oo kormeeri isdabajeeyayaasha
Abuuraan jaantusyada iyo warbixinnada isticmaalka dashboardka
Injineerada aqoonsiga tayada
Xarunta Tayada / Maamulayaasha ALM
Hagaha Hubinta Tayada
Xarumaha tayada kale / Macaamiisha ALM ee mas'uul ka ah kormeeridda hawlaha, macaamiisha iyo naqshadeynta shaqaynta
Barnaamijka wuxuu bilaabay HP, oo loo yaqaan HP-SU (Jaamacadda Software). 70% ee imtixaanka kombiyuutarka ee suuqa ayaa la dhammeeyey iyadoo la adeegsanayo qalabka HP ee qeexaya qalabka korontada. Barnaamijkan ayaa si aan caadi ahayn loogu qorsheeyay in warshadu samaysay tusaalayaal waxayna leeyihiin dhamaan fikradaha muhiimka ah iyo goobaha tijaabada ah ee barnaamijka. Waxay xoogga saartaa Nidaamka iyo Automation ee imtixaanka GUI iyo codsiyada ku saleysan API, oo ay la socoto qalabyo badan oo la adeegsaday HP robotization.
Meelaha ay fahmayaan waxay fahmi doonaan fikradaha asaasiga ah ee tijaabinta codsiga iyadoo la fahmayo SDLC (Software Development Lifecycle) oo qaado tallaalka STLC (Barnaamijka Lagu Sameeyo Isticmaalka Software). Barnaamijkan wuxuu qeexayaa hababka SDLC kala duwan iyo heerarka imtixaanka, noocyada kala duwan ee imtixaanka, Sida loo helo mabaadii'da macaamiisha iyo waa QA? Maxaa badan, waa maxay qaybta? Inta oo dhan. Intaa waxaa dheer in diiradda la saaro qiimeynta khatarta ah ee hawlaha joogtada ah iyo waqti gaaban ka dib sameynta kaydka aasaasiga ah (Qorshaha Imtixaanka, Kiiska imtixaanka iyo RTM). Hirgelinta tijaabooyinka waxaa loo qabtaa si loo helo natiijooyinka iyo in la eego haddii aan helnay natiijada caadiga ah ama aan ahayn. Sidoo kale waxaan ka wada hadli doonaa noocyada imtixaanaadka (Buug-gacmeedka iyo Gawaarida) oo abuuraya KPI (Tilmaamayaasha Wax-qabadka Muhiimka) ee Hubinta Tayada.
Waa qalab teknoolajiyadeed oo uu sameeyay HP si loo eego faa'iidada GUI ama codsiyada ku saleysan API. Maaddaama ay tahay aaladaha mishiinka, waxay sameeyaan qoraallada VB si ay u sameeyaan imtixaan. Understudy waxay baran doontaa waxqabad si ay u sameeyaan qoraallo cusub, u hagaajiyaan qoraallada si loo hagaajiyo imtixaanka. Hagaajinta, oo ay ku jiri doonto aragti iyo is-waafajin loo adeegsado qoraalka, oo ay ku jiraan iskudhafka, isbaarooyinka, iyo qiimaynta.
Xilliga kooraska, xubnuhu waxay helayaan jaangooyooyin badan oo ka mid ah wakhtiga ay qabsadeen kobciyeyaashooda maaddaama ay qorsheeyaan tijaabooyin imtixaan oo aad u sareeya. Si loo balaariyo dib u soo noqoshada waxay sameyn doonaan waxqabadyada dib loo isticmaali karo, maktabyada shaqada, iyo bakhaarada mujtamaca muxaafidka ah, xubnaha ayaa la siin doonaa khabiir ku habboon si loo baaro arjiga.
Baahida imtixaanka dhammeystiran waa isku xiran yihiin. foorjarin dhinaca OT si loo dhigo, taasina waa mid aad u dhib badan ama midkood wuxuu kudhici karaa 30% -40% natiijada fulinta iyadoo la adeegsanayo buug gacmeed. Si aad u garaacdo xaaladahan oo kale si aad u hesho dhacdo kasta oo ka mid ah 90% -95% natiijada imtixaanka, falanqaynta fulinta waxay adeegsaneysaa VuGen si loo sameeyo qoraallada Vuser. Vugen wuxuu qorayaa wadashaqeynta ka dhexaysa Client / Server (isdhexgalka), si ay u qabsadaan dirista iyo aqbalida macluumaadka. Waxay isticmaashaa turjumaan luuqadeed oo C ah si uu u qoro habka SUT, taas oo ka dhigaysa qoraalka C. Marka ugu horeysa waxay billaabataa waxqabadyada duubista si ay u muujiyaan akhlaaqda iyo dhaqdhaqaaqa macaamiisha farsamada ee ka shaqeeya qaabka C / S.
Kadib markii qoraalka lagama maarmaanka ah la sameeyay, ka dibna wuxuu isbeddelaa si loo casriyeeyo qoraalka oo ah in uu Parameterize (Ka Hortagga Macluumaadka Ka-hortagga) oo wuxuu xaqiijiyaa Xaqiijinta (Baarista Jawaabta Kulanka). Tani waxay ku jiri doontaa aqoonta iyo is qabadsiinta qoraalka. Koorsadan Vugen waxaa loogu talagalay inay siiso macluumaad ku shaqeynaya si ay u hubiyaan isticmaalka isticmaalka adigoo ka yar culeyska isticmaalka aaladda qalabaynta.
Si aad u fuliso tijaabin aan ku shaqeyneynin sida imtixaanka waxqabad, falanqaynta fulinta waxay isticmaalaan qalabka isbuyuutarka sida LoadRunner. Waxaa loo istcimaalaa si loo soo saaro saxan ka sarreeya Server-ka si loo hubiyo fulinta SUT (Server oo tijaabo ah).
LoadRunner waa software xirmo ah oo ka kooban saddex qalab software:
Stack Runner wuxuu xoojiyaa baaritaanka fulinta si uu u sameeyo Vusers (Isticmaalayaasha Waalidka) si ay ugu dhejiyaan culeyska kumbiyuutarrada sida nidaamyada kala duwan ee baaritaanka fulinta sida load test, Cadaadiska Nabadgalyada, Baadhitaanka Cadaadiska, Baadhitaanka Volume iyo wixii la mid ah.
Isku-duwaha nutska iyo bolts ee Maareynta Lifecycle Application kaas oo kaa caawin doona inaad kormeerto dhammaadka nolol-maalmeedka isticmaalka iyo marxaladda imtixaanka. Bilowga hore koorsadu waxay bilaabmaysaa in ay hoos u dhigto Maaraynta Maaraynta Maareynta Maareynta Nafaqada kaas oo u oggolaanaya macmiil inuu sameeyo oo kormeero hawlaha iyo macaamiisha oo ay weheliyaan xuquuqda macmiilka. Ka dib markii macmiilka qaybta maamulku uu la kulmi doono macaamiil nololeed oo ka soo baxa sii-deynta ku-meel-gaadhka wakhtiga dhammaystirka nolol-dhamaadka, Shuruudaha lagu muujinayo faa'iidada arjiga, Qorshaha Imtixaanka wuxuu faa'iido u yeelan doonaa habeynta habka imtixaanka iyo xaaladda, Shaybaarka Imtixaanka wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay fuliyaan imtixaanka la filayo, in la sameeyo oo la kormeero isbeddelada iyo Dashboard oo la arki karo kuwaas oo udubdhexaad u ah inay soo saaraan warbixinno iyo jaantusyo si loo baaro si ka fiican isticmaalka.
Qalin-jabin kasta ayaa la fahmay
Barashada SDLC ama STLC
Tilmaamaha / Gawaarida Gawaadhida
Sii dheer madaxa
Macluumaadka Xafiiska MS Office ama barnaamijka muhiimka ah
Faahfaahin foomamka software codsiga
Fikradaha Imtixaanka - ALM
Sababta Mawduuca Nidaamka Sawir-Isticmaalka Xogta ugu Fiican